Dagaallo ka dhacay Beled-Xaawo iyo Muqdisho - BBC News Somali
5 Maarso 2011
Dagaal culus oo ilaa shan saacadood socday ayaa saakay ka dhacay magaalada Beled Xaawo ee ku taalla xadka Soomaaliya iyo Kenya.
Wuxuu dagaalkan u dhaxeeyaa kooxda al-Shabaab oo magaalada ka talin jirtay iyo kooxo weerar kaga qaaday dhinaca magaalada Mandera, oo la sheegayo in ay yihiin ahlu Sunnah wal-Jamaaca iyo ciidamada dowladda.
Dagaalka Beled-Xaawo wuxuu saameeyay nolosha magaalada Mandera iyo guud ahaan ammaankeeda. Weriye BBC oo ku sugan halkaas ayaa sheegay in saaka magaaladu ay dansan tahay dhinaca dhaqdhaqaaqa dadka, iyadoo dadka rayidka ay ka cabsadeen in ay furaan dukaamada iyo in ay guryahooda ka soo baxaan.
Rasaas iyo sawaxan hubka la isku waydaarsanayo dagaalka ayaa laga maqlayaa Mandera iyadoo dadka qaar leeyihiin duqaynta qaar ayaa soo gaaraysa Mandera.
Warar ayaa sheegaya in gudaha magaalada Mandera ee dhinaca xadka Kenya lagu arkay gawaari gaashaaman oo ay saaran yihiin ciidamo hubaysan oo aan ahayn Kenyan oo dhex maraya magaalada, kuwaas oo loo malaynayo in ay qayb ka yihiin dagaalka Beled-Xaawo inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin.
A-shaab, ayaa wararku sheegayaan in ay banaysay magaalada Beled xaawo, oo ay hada ku jiraan magaalada maleeshiyada Ahlu Sunnah iyo ciidamada dowladda.
Rasaas goos goos ah, ayaana laga maqlayaa Beled-Xaawo. Waxaana istaagay dagaalka xoogiisii.
Dhinaca kale, dagaal magaalada Muqdisho xalay ilaa iyo maanta ka socday oo u dhexeeya ciidammada AMISOM oo kaabaya kuwa dowaldda ku-meel-gaarka oo isku dhinac ah iyo xoogagga Xarakada Al-shabaab.
Waxaa dagaalkan maanta la sheegay in ay ku dhinteen ilaa 8 qof, 16 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii saakay ay kooxda al-Shabaab weerar xoog leh ku qaaday wasaaradda gaashaandhigga.
Cabdixakiim Maxamed Xaaji Fiqi, Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, ayaa sheegay in ay fashiliyeen qorshe baabuur isqarxin la damacsanaa in lagu qarxiyo wasaaradda gaashaandhigga.
Wax war ah kama soo bixin al-Shabaab oo xaqiijinaya ama beeninaya isku dayga isqarxintan.
Mana jiraan warar madaxbanaan oo sheegaya qasaaraha dagaalka ee labada dhinac kala gaaray.